10 Nkụzi Ọzụzụ Ọkụ na Nyocha Software na-eme gị nde mmadụ
Usoro Nlekọta Ọnwụ na 10 na Nyocha Software nwere ike ime ka ị bụrụ nde mmadụ
Nyocha ngwa ngwa / ngwanrọ, dị ka ngwa ngwa / ngwakọ, igwe ojii nhazi, & nyocha ihu igwe na-eweta ihe ịma aka ndị ọrụ nyocha software taa, ọtụtụ n'ime ha adịghị eji ngwaọrụ na ihe ọmụma kwesịrị ekwesị ebili na nsogbu. Nchọpụta Technology Solutuions ọhụrụ na-enye ọrụ zuru ezu Software nyocha Ọzụzụ ọzụzụ & akwụkwọ ikike iji nyere gị aka ịnapụta ngwa ngwa & ọsọ nke azụmahịa gị.
HP QTP UFT 11.5x dị mkpa
HP Ngwa Lifecycle Management (ALM)
Usoro Nkuzi 10 na-egbu egbu na Nyocha Software & Asambodo
1. Ọzụzụ Selenium
Ihe mgbaru ọsọ nke Selenium
Ndị na-eleta anya maka Selenium
Ngwa Maka Selenium
2. Nkụzi Ule Ọgwụ
Ihe mgbaru ọsọ nke ule nyocha
Ndị na-eche maka nyocha maka ule Software
Ihe mgbaru ọsọ nke HP VuGen v11.5
Ndị na-eme atụmatụ maka HP VuGen v11.5
Ndị na-ege ntị maka isiokwu maka HP Trim Training
Ihe choro maka HP Trim Training
5. HP Tipping Point
Ihe mgbaru ọsọ maka HP Tipping Point
Ndị na-eme atụmatụ maka HP Tipping Point
Ngwa maka HP Tipping Point
6. HP QTP UFT 11.5x dị mkpa Ọzụzụ
Ihe Mgbaru Ọzụzụ UFT
Ndị na-eleta anya maka UFT Training
Ihe ndozi maka ọzụzụ UFT
7. Ịgba ọsọ ọsọ v11.5 Ọzụzụ
Ihe mgbaru ọsọ nke nlekota oru v11.5
Ndị na-eleta anya maka Stack Runner v11.5 Training
8. Nchekwa data
Ihe mgbaru ọsọ nke Nchedo Ozi
Ndị na-elebara anya maka Nchedo Ozi
Ihe choro maka Nchedo Ozi
9. Ngwa Lifecycle Management Ọzụzụ
Ihe mgbaru ọsọ nke Ngwa Lifecycle Management Ọzụzụ
Ndị na-ege ntị maka ndị na-ahụ maka ngwa Lifecycle Management Training
10. Nyocha Software - Akụrụaka
Nlereanya Software - Usoro mmekota na-enye:
Okwu mkparịta ụka maka ule:
Ejikọta ọnụ ule arụ ọrụ (UFT / QTP):
Onye na-arụ ọrụ na njikwa (VuGen):
Ngwa Lifecycle Management (ALM):
Ndị na-eche maka nyocha maka Nyocha Software - Akụrụaka
Selenium bụ oghere na-emeghe na usoro ntinye ngwaọrụ s / w nke a na-eji maka ule nyocha (ngwa weebụ). E nyere ikike n'okpuru 2.0 License Apache. Selenium bụ ụlọ ngwaọrụ nke na-enyere aka n'iji ngwa weebụ. Omume nkuzi a ga - enyere gị aka ịghọta Selenium na ihe yiri ya na ojiji ha nwere. Ọ nwere ikike iji arụ ọrụ crosswise maka ụdị ọrụ na mmemme dị iche iche. Selenium abughi nani ihe efu ma obu nkwekorita nke ihe ichotara nke na enyere ndi nyocha aka iji ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
Selenium bụ kọmpụta mmemme mmemme nke kpughere maka ngwa weebụ. Nke a bụ klas nkuzi zuru ezu nke nyocha nyocha gụnyere Okwu Mmalite nke Testing Automation, Okwu Mmalite nke Selenium IDE na ntinye ya, Selenium IDE echiche, Selenium RC, TestNG, Ọrụ Web Driver, Framework and Selenium Grid na ihe ndị ọzọ.
Selenium bụ ngwaọrụ na-emeghe.
selenium Enwere ike ịpụta maka ọganihu dị iche iche na-ekpughe DOM.
Ọ nwere ikike ime ihe ederede crosswise n'elu usoro dị iche iche.
Ọ nwere ike ime ihe odide na arụmọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ.
Selenium bolsters ekwe ntị.
Emezu ule n'ime usoro ihe omume ahụ, ya mere a naghị achọ ya mgbe a na-egbu ihe ederede n'ọdịnihu.
O nwere ike ime ule na mmekorita ya na iji Selenium Grids.
Ihe omumu ntuziaka a bu maka ndi okachaputa ule ajuju ndi choro icho ihe di mkpa nke Selenium site na ihe omuma. Ihe omumu ntụziaka ahụ nwere ihe ndozi zuru oke iji kpochapụ gị na Selenium site na ebe ị nwere ike ịme onwe gị ka ị nwee nnukwu nkà.
Tupu ịga n'ihu na mmega ahụ ntụziaka a, ịkwesịrị ịnwe nghọta dị mkpa nke Java ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ajụjụ a na-ahọpụta usoro mmemme. N'otu aka ahụ, ị ​​kwesịrị ịmara ihe ndị dị mkpa nke ịnwale echiche.
Usoro a na-etinye uche na mkpịsị na ule nke Test Testing nke ga-enyere gị aka inweta nyocha nke usoro nyocha, ụdị, na ụzọ iji rụọ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ nyocha.
Usoro a na-adabere na ọnọdụ ọ bụla, nke na-enye aka ịghọta ihe nlele, SDLC, STLC, nyocha akwụkwọ na isiokwu dị iche iche nke dị mkpa iji rụọ ọrụ nyocha. Ihe ọmụmụ a na-echebara ihe ndị dị mkpa mkpa, iji kpebie nhazi ule dị iche iche, mgbe ndị ahịa ahụ ga-aga n'ụdị ule dịgasị iche iji chọpụta ngwa bara uru na àgwà ndị na-abaghị uru, ma ga-adị njikere ịnwale ma nwalee ọnọdụ iji lee ngwa ngwa n'akụkụ ọ bụla , N'ikpeazụ, ọ ga-abanye n'ime ya ma nye nkọwa dị iche iche banyere ihe eji eme nrube.
Ghọta ihe ndị a na-eme na nyocha nke software na ụkpụrụ ya
Iche iche iche ụdị SDLC
Usoro nyocha nke Characterize iji mezuo mkpa azụmahịa
Ịmara ọdịiche dị na njedebe ule
Gọọmentị na-achịkwa ihe ize ndụ ma chọpụta otú o si emetụta ule nyocha
N'iji akuko na mmechi kpochapu isi iji kwue ihe omuma
Ịmata ọdịiche dị iche iche nke nyocha
Ịmata ọdịiche dị iche iche nke nlele nke nnwale
Onye obula nke choro ibido uzo n'ule nyocha
Ihe omuma nke
Ebe na usoro
Nlele ihe mkpocha mkpa ijikọtara. na-etinye aka na SUT iji tinye nchịkọta, nke bụ nsogbu na-enweghị isi ma ọ bụ onye nwere ike ịbịaru 30% -40% nke nsonaazụ ahụ na arụ ọrụ ntuziaka. Iji tie ụdị ọnọdụ a na iji nweta ihe ọ bụla nke 90% -95% nke ihe nlele, nyocha nyocha na-eji VuGen eme Vs.
Vugen na-edekọ mmekọrịta dị n'etiti Ndị ahịa / Server (mmekọrịta), iji jide ozi na iziga ozi. Ọ na-eji C na-asụgharị asụsụ ntụgharị edekọ usoro SUT, nke na-eme ka edemede C. Ná mmalite, ọ na-amalite site na ndekọ ihe iji chọpụta omume na ọrụ ndị ahịa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na C / S engineering.
Mgbe edepụtara edemede dị mkpa, mgbe ahụ, ọ na-agbanwe na mmelite nke edemede ahụ na ọ bụ Nhazi (Chebe Data Caching) ma mee ka nkwenye na-elekwasị anya (Checks Server Response). Nke a ga-agụnye nghọta na ime mgbanwe n'ime edemede. Ebumnuche nke Vugen a bụ iji nye aka na-arụ ọrụ maka ịlele omume nke itinye n'ọrụ n'okpuru ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ihe omumu nke bu ihe kwesiri ibu iji nyocha ule
Ghọta akụkụ LoadRunner (LR)
Tinye usoro ọrụ a chọrọ iji mee ka ọnọdụ LR dị mkpa
Ihe ndekọ ederede na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ na-ejikarị Onye Nhazi Generator mepụtara (VuGen)
Nzọụkwụ na ụdị azụmahịa na-eji mgbanwe eme ihe
Nhazi akwukwo iche iji di iche ozi ntinye aka
Ejiri akwukwọ ederede iji mezie ozi-emepụta ihe
Na-arụ ọrụ na Rendezvous iji mepụta nrịkọta ọtụtụ na akpan akpan
Quality Insurance Engineer na arụmọrụ Engineer.
Maka ndị ahịa ọhụrụ ndị chọrọ ịmepụta edemede iji chọpụta ngwa weebụ.
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ nyocha usoro.
Ntọala saịtị na usoro ihe omume.
Ahụmahụ na-enweghị atụ
Asụsụ C mmemme.
Echiche nke Onye ọrụ ahịa / Sistem nhazi.
A na-akpọ Hp Trim onye na-akpọ Record Manager. Nke a na-eme atụmatụ HP Trim a iji nyere ndị nduzi aka ịhazi, ịhazi na actualize ọrụ ọrụ na HP Records Manager. Ndị òtù ga-eme usoro ọrụ dị mkpa maka mkpakọrịta ha.
Enweghi ike ijikwa ya, ndi nchịkwa ederede, na -azụ ndị ahịa, ndị ọrụ nlekota azụmahịa na ndị ọrụ ibe ha ọzọ
Njedebe na njedebe nke Onye Nkwụsịgwụ na-akwadebe ma ọ bụ ahụmịhe zuru oke nke ọnwa 6 ma ọ bụ ihe niile iji HP TRIM ma ọ bụ HP Records Manager na ngalaba ọkachamara.
Ịmụ banyere usoro nlekọta ndekọ na ụdị azụmahịa.
Aka a na-egosi echiche na omume kachasị mkpa maka nrụnye, ndokwa, usoro nhazi na nlekọta nchebe nke ndokwa Tipping Point. Site na adreesị ọgụgụ isi na aka na omume, ndị òtù ga-achọpụta otu esi egbu usoro Intrusion Prevention System (IPS) na Nche Management System (SMS).
Mgbe ị gwụchara nke a HP, ị kwesịrị inwe ike ime ihe ndị a:
Nyochaa nchedo nchedo isi
Nyocha usoro intrusion Prevention System setup na imewe
Nlekọta Nchebe na-arụ ọrụ na nhazi
Mee atụmatụ na ọnọdụ
A nabatara usoro iwu kwadoro
Hazie ndị injinia, ndị ọkachamara na-eme ndokwa, ndị na-elekọta ndị nlekọta, ndị nlekọta nche, ndị nduzi ntụzi, ndị nhazi engineering, hazie usoro nche na ịhazi ndokwa.
Ogige ugbo na-ahazi mkpocha na nchịkwa na-enyocha
Ọmụmụ ihe dum gbasara usoro ihe nchịkwa na nchedo
Mmekọrịta na Nche netwọk na-enyocha
Ihe ọmụmụ a na-etinye uche na ihe ndị dị mkpa nke nyocha nke arụkọrịtara arụ ọrụ nke ga - enyere gị aka ịbanye n'ule nyocha software site na uru bara uru nke ugbo nyocha. Tupu ihe ọ bụla, usoro ahụ ga-amalite site na ndekọ na nlọghachi oge, ndị otu ga-amụta ikike ịme ihe odide ọhụrụ, gbanwee ederede iji kwalite ule. Na nkwalite, nke ga-agụnye nghọta na ngbanwe n'ime edemede, gụnyere mmekọrịta, nyocha, na nhazi.
Ka oge na-aga, ndị òtù ahụ na-agbaso ụkpụrụ dị iche iche nke ndị mmepe na-ejide mgbe ha na-edepụta ihe odide ka njọ. Iji mewanyewanye ọkpụkpụ ahụ, ha ga-eme ihe omume ndị nwere ike ịmegharị, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, na ịkekọrịta ụlọ ahịa ajụjụ, ndị otu a ga-enwe ike ịmepụta nke ọma maka ịnwale ihe ọ bụla.
Mee nhazi usoro nyocha usoro nyocha iji tinye aka na ntuziaka
Imelite ule dị mkpa na-eji mmekọrịta eme ihe mgbe ị na-edekọ na mgbe ị na-edekọ
Na-eme ka kọmputa na-edepụta ihe ndị ọzọ na-eji ike eme ihe
Imegharia ihe omume a na-agbanwe ya ma gbanwee ya maka mmelite ka mma
Iji Ihe Ntughari Ihe
Na-ewere ihe otiti na nchọpụta Ihe ma na-agbanwe nrịba ama dị iche iche na-egosipụta ihe onwunwe
Na-arụ ọrụ na Njirimara ihe iji mee ka ọ dịkwuo ike
Na-arụ ọrụ na iche echiche dị iche iche nke UFT
Ime nchọpụta omenala iji gosipụta ngwa na nlele anya ahịa
Onye na-agba ọsọ na UFT site n'iji mmekọrịta na mpaghara dị iche iche nke UFT mee ihe
Ịgafe ihe dị iche iche nke ndị ahịa na-etinye na parameters
Na-ewepụ ihe ọmụma oge oge na oge na-agba ọsọ
Na-arụ ọrụ na ule mara
Maka ndị ahịa ọhụrụ ndị chọrọ ịgbanwe site na akwụkwọ ntuziaka iji nyochaa robotization na-eji UFT eme ihe
Maka Ogozi Nleta Okike nke choro igosi ihe ndi otu ndi agha na-edu site na itinye UFT n'ọrụ
Ihe omuma nke:
Ntọala saịtị na usoro ihe omume
Ahụmahụ nke ezi uche na:
Iji mee ule na-enweghị arụ ọrụ dịka nyocha nke ọrụ, ndị nchịkọta igbu ihe na-eji ngwaọrụ arụ ọrụ dika LoadRunner. A na-eji ya iji mepụta ọrụ zuru oke na Server iji lelee mbibi nke SUT (Server n'okpuru ule). LoadRunner bụ bundle software nke nwere ngwe ngwanrọ atọ:
Onye na-arụ ọrụ na njikwa (VuGen)
Onye na-agba ọsọ ọsọ na-enye onye nyocha nyocha ime ka Vusers (Ndị Ọrụ Nlekọta Ọrụ) tinye ọrụ siri ike na sava banyere usoro nyocha dịgasị iche iche dịka nyocha ule, ule nrụgide, ule nkwụsị, nnyocha nyocha na ihe ndị ọzọ.
Ihe omuma nke achọrọ maka nyocha ule
Jiri akwukwọ edepụtara VuGen, tinye ndokwa ntọala ọsọ ọsọ, na-arụ ọrụ na mkpocha ihe, na-ebunye Ibu Ibu Ibu Ibu (LG), na ọnụọgụ nke Onye ọrụ mepụtara (Vusers) maka ọnọdụ LR n'ọnọdụ ìhè nyocha
Gwuo otu ule kpokọtara na ngwa gi site na igbado ọnọdụ
Na-arụ ọrụ na chaatị na ndepụta tinye n'ọrụ Analysis
Ngalaba na-arụ ọrụ na nyocha usoro.
Usoro a na-enye ozi ndị bụ isi iji nye ndị nlekọta nchịkọta ọrụ ikike iji hazie ma na-elekọta HP Data Protector software. Mgbatị aka na-eme ka nkwenkwe nkwenye na-ewusi ike iji mee ka nghota siri ike nke nkwalite na mgbakeghachite echiche, uru nke ngwanro ahụ na ngwa ya iji na-agba ọsọ nsị.
Gwa na kesaa HP Data Protector software na gburugburu ebe obibi gị ma ọ bụ kpochapụ ya site na nsụgharị Data Data Protector gara aga.
Dezie ihe ngwa ngwa HP Data Protector.
Kwadebe nzaghachi ndabere na nkwụnye ndabere nke ndabere ndabere iji jiri HP Data Protector software.
Jiri HP Data Protector software na-akwado, meliteghachi, na ihuenyo site na GUI ma na-akwụ ụgwọ akara.
Mee na HP Data Protector software
Ndị ike na nduzi nduzi na-eji HP Data Protector software.
Njikwa na nchịkwa Network ma ọ bụ ahụmahụ yiri ya.
Maka otu ihe dị mkpa na ihe dị mkpa iji mezuo nkwenye ọ bụla yiri nke ahụ, lee nkọwa nke nkwenye na saịtị HP ExpertOne.
Omume ALM a na-etinye uche na ngwunye na ngwa ngwa nke Life Life Management nke ga - enyere gị aka ileba anya na ịmalite ndụ ndụ nke iji ọganihu na ule. Nke mbụ, usoro ahụ ga-amalite iwepụ na Nlekọta nchịkwa Ngwa Lifecycle Management nke na-ekwe ka onye ahịa mee ma lelee ahịa na ndị ahịa yana ikike ndị ahịa. Mgbe onye nchịkwa akụkụ nke ndị ahịa ga-enweta ngwa ndụ ndụ site na Ntọhapụ maka ịkọ oge oge imecha ndụ, Mkpa iji mara njirimara bara uru, Nlereanya Ule ga-aba uru iji dozie usoro nyocha na ọnọdụ, Ụlọ Nyocha ga-enye ndị ahịa ohere igbu ule, maka ime na ilekọta ezughị okè na Dashboard hụ nke ga-enwe ike ịmepụta akụkọ na chaatị maka iji nlezianya nyochaa itinye n'ọrụ.
Characterize Ngwa Lifecycle Management (ALM)
Kọwaa ọdịiche dị n'etiti etiti ALM
Mee ka ndi mmadu, gbanwee ma mepee ihe di mkpa
Nyochaa ihe ize ndụ ndị metụtara ihe ndị ị chọrọ
Nyochaa ule na isiokwu na ule nhazi osisi
Ndepụta ma nwalee ule
Mepụta edemede nyocha site na nhazi nhazi
Mee nhazi ihe nyocha, Idozi ntuziaka na ule robotized
Edere nyocha na nyocha usoro nyocha
Banye ma lelee ya
Mepụta chaatị na akụkọ ndị na-eji akara ngosi
Ndị ọkà nyocha
Gbasa onye nlekọta
Ụlọ Ọrụ Nlekọta / Nchịkwa ALM
Nkwenye Ịma Mma na-eduzi
Ndị ọzọ na-elekọta Ụlọ Ọrụ / ndị ọrụ ALM na-elekọta ọrụ ndị nlekọta, ndị ahịa na usoro nhazi ọrụ
Mmemme malitere site na HP, nke a na-akpọ HP-SU (Ụlọ Ọrụ Nchịkwa Software). 70% nke nyocha software na ahịa ejirila aka nke HP depụtara Ngwaaka akpaaka. Usoro a ezughi oke ezubere na ulo oru meputara ihe omuma ma nwee echiche na ihe di mkpa na nyocha oru nyocha. Na-eche banyere ntuziaka na akpaaka akpaaka nke GUI na API dabeere na ngwa, tinyere ngwa ngwa HP robotization apparatuses.
Ihe nlekota nke a ga-aghota echiche di iche iche nke ule ngwa ngwa site na nghota oru SDLC (Software Development Lifecycle) ma wepu ugbua na STLC (Test Test Lifecycle). Usoro a na - akọwa ụdị dị iche iche nke SDLC na ọkwa nke ule, ụdị ule dịgasị iche iche, Olee otu esi enweta ahịa ndị ahịa ma onye bụ QA? Kedu ihe ọzọ, gịnị bụ akụkụ ya? N'oge niile. Ihe ọzọ na-elekwasị anya na Nyocha nyocha na ihe ndị na-aga n'ihu na obere oge ka emesịrị mee ntọala ihe dị mkpa (Atụmatụ Ule, Ụkpụrụ Ule na RTM). A na-eme ihe nyocha iji nweta nzapụta ma chọpụta ma anyị nwetara nsonaazụ nkịtị ma ọ bụ. N'otu aka ahụ, anyị ga-atụle ụdị nyocha (Ntuziaka na akpaaka) ma mepụta KPI (Key Performance Indicators) maka Quality Assurance.
Ọ bụ ngwá ọrụ ngwaọrụ HP mere iji hụ na uru nke GUI ma ọ bụ API dabeere na ngwa. Dị ka ọ bụ ngwaọrụ nhazi, ọ na-eme ka edemede VB mee nlele. Nghọta nwere ike ịmụta ihe a ga-eji mee ihe ederede ọhụụ, gbanwee ihe ederede iji meziwanye ule. Ndozi, nke ga-agụnye nghọta na ime mgbanwe n'ime edemede, gụnyere mmekọrịta, nyocha, na nhazi.
Ka oge na-aga, ndị òtù ahụ na-enweta ụkpụrụ ọtụtụ n'ime oge ndị mmepe na-eme mgbe ha na-eme atụmatụ ihe odide ka njọ. Iji mewanyewanye ọganihu ha ga-eme ihe omume a na-emegharịghachi, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, na ịmekọrịta ụlọ nkwakọba ihe, a ga-enye ndị otu ọkachamara dị mkpa maka nyocha maka ngwa.
Nlele ihe mkpocha mkpa ijikọtara. na-agbasi mbọ aka na AUT iji tinye nchịkọta, nke dị oke nsogbu ma ọ bụ onye nwere ike ịbịaru 30% -40% nke nsonaazụ ahịa na arụ ọrụ ntuziaka. Iji tie ụdị ọnọdụ a na iji nweta ihe ọ bụla nke 90% -95% nke ihe nlele, nyocha nyocha na-eji VuGen mee Vs. Vugen na-edekọ ihe mmekorita n'etiti Client / Server (mgbanwe), iji jide ozi na ịnweta ozi. Ọ na-eji C na-asụgharị asụsụ ntụgharị edekọ usoro SUT, nke na-eme ka edemede C. Ná mmalite, ọ na-amalite site na ndekọ ihe iji chọpụta omume na ọrụ nke ndị ahịa na-arụ ọrụ na C / S.
Mgbe edechara edemede dị mkpa, mgbe ahụ, ọ na-agbanwe iji nweta nkwalite nke edemede ahụ na ọ bụ Nhazi (Kpochie Data Caching) ma mee ka nkwenye na-elekwasị anya (Checks Server Response). Nke a ga-agụnye ihe ọmụma na ntụgharị uche n'ime edemede. Ebumnuche nke Vugen a iji nye aka na-arụ ọrụ maka ịlele omume nke ojiji n'okpuru nnukwu ihe eji arụ ọrụ ngwaọrụ.
Iji mee nyocha nke na-adịghị arụ ọrụ dịka nyocha arụ ọrụ, ndị nchịkọta nchịkọta na-ejizi ngwaọrụ dịka LoadRunner. A na-eji ya iji mepụta ọrụ zuru oke na Server iji lelee mbibi nke SUT (Server n'okpuru ule).
LoadRunner bụ bundle software gụnyere nke atọ software ngwaọrụ:
Onye na-agba ọsọ ọsọ na-enye onye nyocha ọkpụkpụ aka iji mee Vusers (Ndị Ọrụ Nlekọta) iji tinye ọrụ siri ike na sava dịka nyocha usoro mkpechapụ dịka nyocha ule, Nlegide nrụgide, ule nkwụsị, nnyocha nyocha na ihe ndị ọzọ.
Na-eche na ngwa ndụ nke ndụ Lifecycle Management bụ nke ga-enyere gị aka ileba anya na ndụ nke ndụ iji nweta ọganihu na ule. Ná mmalite, usoro ahụ ga-amalite iwepụ na Nlekọta Nchịkwa Ngwa Lifecycle Management nke na-enye ndị ahịa ohere ịme ma na-elekọta ọrụ na ndị ahịa na ndị nwe ahịa ikike. Mgbe onye nchịkwa akụkụ nke ndị ahịa ga-enweta ngwa ndụ ndụ site na Ntọhapụ maka ịkọ oge oge imecha ndụ, Mkpa iji mara njirimara bara uru, Nlereanya Ule ga-aba uru iji dozie usoro nyocha na ọnọdụ, Ụlọ Nyocha ga-enye ndị ahịa ohere igbu ule, maka ime na ilekọta disformities na Dashboard hụ nke ga-echebara ịmepụta akụkọ na esemokwu iji nyochaa njikwa iji nyochaa.
Ntụle akwụkwọ ọ bụla gafere
Ịmụta banyere SDLC ma ọ bụ STLC
Ntuziaka / Akpaaka na-egosi
Ndị na-eme ihe nfe
Ozi nke Windows
Ozi gbasara MS Office ma ọ bụ software dị mkpa
Usoro nyocha ngwa ngwa
Ihe nyocha - Maka ALM
PHP Mailer Liberaries Kpochapụ mkpokọta nkeji oge ọ bụla ị naghị agụ isiokwu a
Gịnị kpatara table? Software kachasị mma nke Data Visualization